Baarlamaanka Soomaaliya: Wax ka ogow xildhibaanno 20 ka sano ka mid ahaa | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Baarlamaanka Soomaaliya: Wax ka ogow xildhibaanno 20 ka sano ka mid ahaa
Baarlamaanka Soomaaliya: Wax ka ogow xildhibaanno 20 ka sano ka mid ahaa
Muddo labaatan sanno ah ayaa laga joogaa heshiiskii lagu dhisay hay’addaha dawaladda Soomaaliya ka dib burburkii dawladdii hore ee Maxamad Siyaad Barre uu hogaaminayay ee dhacday 1991 kii.
Heshiis ka dhacay maagalada Carte ee dalka Jabuuti ayaa lagu dhisay barlamaankii ugu horeeyay kaasoo afartii sannaba mar la badalo.
Ku dhaawaad lixdan xildhibaan haddaanay ka badnayn ayaa xilli kasta barlamaanka ku soo laabta iyagoo dib loo soo xulay ama loo soo doortay.
Barlamaannadii hore waxa xuli jiray suldaanka ama ugaaska reerka laakiin kan hadda jira waxa doortay ergo 51 ah oo ka socota beesha kursiga leh.
Xildhibaan Cismaan Libaax Ibrahim
Shariif Xasan iyo siyaasadda Soomaaliya
Dumarka ama gabdhaha oo markasta oo la dhisayo barlamaan la yiraahdo ha loo xiro qoondo u gaar ah iyaga maadaama la ogyahay in odayaasha beeluhu doonaayaan inay rag xulaan ayaa haddana waxa jira gabdho xildhibaanno ah oo tan iyo Carte aan kuraastooda waayin oo la soo xulayay.
Khadiijo Maxamed Diiriye, Wasiirka Dhallinyarada iyo Ciyaaraha, ahna Xildhibaan ka tirsan
Khadiijo Maxamed Diiriye, Wasiirka Dhallinyarada iyo Ciyaaraha, ahna Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Federaalka
Xildhibaan Khadiijo Diiriye Waxay u aragta in sababta ay u soo laalaabato ay tahay in beesheedu ku qanceen isla markaana ay jirto doonista rabbi.
“Horta waxaan leeyahay haddaan Soomaali nahay umad muslim ah ayaan nahay, bixinta ALLE ayaa iska leh, ciddii uu doono ayuu mansab siiyaa ciddii uu doonana ma siiyo aas kow”, ayey tiri.
Waxay intaa ku dartay: “Labo, bahasha iyadaa i barganaysay oo hidde iiga timid, haween ahaan keliya ma ahayne reer ahaan. Reerkayga waa isoo hormariyay mudaddii burburku jiray oo kursigayga saxan dahaba ayaa la soo saaray. 30 kiisanno ee ka horeysayna kacaankii, eedaday Faadumo Cumar Xaashi, ayaa ku jirtay marka bahal i bar-garanaysana waa timid een nasiibku waa i saaciday bixinta Allana waa meesheeda.”
Dhammaadka sannadkan ayuu ku egyahay barlamaanka hadda jira, waxaana la filayaa in barlamaan cusub in la soo dhiso.
“Dadaalka uu qofku galo iyo galaangalka uu u leeyahay nidaamka dawliga ah ee markaas jirana way tahay (Sabab caawisa), gacan shisheeyana mararka qaarkood qayb bay ka noqotaa,” ayuu yiri Cabdillahi Maxamad Shirwac
Xigasho Bbcda Soomaaliga
Previous articlePresident Dani meets with Speaker of the Upper House Senator Abdi Hashi
Next articleAirstrikes target members of al-Shabaab
Sarkaal ka tirsan sirdoonka Sacuudi ah oo ku eedeeyay dhaxalsugaha...
Maamulka Puntland oo ogolaaday shir Muqdisho maamul Goboleyada loogu qaban...